Baiboly natsipy teny am-baravarankely
"Fa toy ny ranonorana sy ny orampanala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any, raha tsy efa nahavonto ny tany ka nampaniry sy nampahavokatra azy… dia ho tahaka izany ny teniko … : tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay … ampandehanako azy. " Isaia 55. 10:11
Niresaka am-pilaminana ireto mpandeha roalahy teny ambony fiarandalamby namakivaky an’i Georgie (Firaisana Sovietika taloha). Tampotampoka teo, fantatr’ilay iray fa mpitandrina ity niresaka taminy. Nihahenjana ny fomba fiteny. Namoaka ny Baiboliny avy tao anaty valiziny ilay mpitandrina, ary namaky ampahany vitsivitsy. Tsy nisy nilana izany. Samy nijoro tamin’ny heviny izy roalahy, ary nanjary nangina tanteraka ny tao anaty fiarandalamby.
Fotoana fohy taorianan’izany, rehefa niverina avy tany an’efitra fidiovana ilay mpitandrina, dia nahita ilay mpiara-dia taminy nanidy ny varavarankely. Tsy teo intsony ny Baiboly. Nifampijery izy roalahy, samy tsy nisy niteny. Volana vitsivitsy tatỳ aoriana dia nisy olona tsy fantatra, tonga tany amin’ilay mpitandrina.
— Maniry ny hatao batisa aho, hoy izy.
— Inona no fiangonana misy anao ?
— Tsy manana aho. Namaky ny Baiboly aho ; nasehony ahy fa mpanota aho, nianatra nahafantatra Ilay Andriamanitra Mpamonjy aho.
Mahimahina ilay mpitandrina, satria tamin’izany fotoana izany dia voarara ny mizara Baiboly sy mitory filazantsara, ka nanadihady hoe :
— Ahoana no nahazoanao Baiboly ?
— Teo amin’ny asako aho dia voatendry hisafo trano iray nanamorona ny lalamby. Nandalo ity fiarandalamby, ary nisy zavatra latsaka teo an-tongotro. Baiboly ilay izy.
— Any aminao ve izany Baiboly izany ?
— Atỳ mihitsy, ity ilay izy.
Noraisin’ilay mpitandrina ilay boky, ary fantany fa ny Baiboliny io.
Taona vitsivitsy tatỳ aoriana, niverina nalalaka indray ny fivavahana tao amin’io tany io, ka nisy fivoriana kristiana niforona tao amin’ilay tanàna kely nisy ity olona niova fo.